Roborock inounza kuzvibvisa kune yepakati-renji futi | Nhau Gadgets
Roborock, iyo kambani inoshanda mukusimudzira nekugadzira ese ari maviri marobhoti uye asina cordless imba vacuum cleaners, nhasi yakaunza yayo nyowani yepakati-renji robhoti vacuum uye yekuzvibvisa yega base package, iyo Roborock Q7 Max +, iyo yekutanga modhi yeiyo itsva Q yakatevedzana.
Nechigadzirwa chitsva ichi, chinopa kwakasimba 4200PA kuyamwa kunoshanda pamwe chete nerabha bhurashi rinogara rinobvisa tsvina yakadzika-yakadzika kubva pamakapeti uye pasi. Iyo rubber brashi inopesana zvakanyanya nebvudzi tangling, zvichiita kuti kugadzirisa kuve nyore. Pamusoro pezvo, iyo Q7 Max + scrubs uye vacuums panguva imwe chete, ichiita kudzvanywa kwe 300g uye 30 mazinga ekuyerera kwemvura kuitira kugadzirisa.
Inoperekedzwa neiyo itsva Auto-Empty Dock Pure inodurura tangi otomatiki mushure mega yega yekuchenesa kutenderera, kubvumira anosvika 7 mavhiki ekushanda pasina. Uyezve, kekutanga mumhando yeRoborock, tangi remvura 350ml uye 470ml guruva kapu zvakabatanidzwa kuti zvive nyore kushandisa.
Iyo Q7 Max+ inowanikwa mune nhema uye chena kune RRP ye649 €, nepo Q7 Max robhoti, iripo zvakare, ine RRP ye449 €.
Padanho retekinoroji, nyowani ye3D mepu inoshanda inobatanidza yakakura fenicha, senge sofa kana mibhedha, pamepu, nenzira iyi nzvimbo yeimba inonzwisiswa zviri nani. Iyo zvakare inobvumira iyo sarudzo yekuchenesa zviri nyore kutenderedza fenicha nepombi yakapusa pane app. Zvichiri zvichibva paRoborock's PresciSense laser navigation system, iyo Q7 Max + mepu uye inoronga nzira yekuchenesa inoshanda, uku ichikubvumidza iwe kuti usarudze iyo yakanyanya kunaka modhi, kusanganisira kuronga uye kunyange tsika tsika, senge kuchenesa zvakanyanya. kubva mukicheni mushure mekudya kwega kwega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » Roborock inounza kuzvibvisa kune yepakati-renji zvakare